Dalxiisayaal lagu qabsay inay qaadaan boor lagu qoray: ‘Waxaan nahay tuugo’ kadib.. | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in La-yaabka December 29, 2016	0 293 Views
Jakarta (Himilonews) – Laba dalxiisayaal oo ku sugan dalka Induniisiya kuwaas oo lagu qabtay xatooyada laba bushkuleeti ayaa lagu qasbay inay waddooyinka la maraan boorar lagu bahdilayo, marka loo eego muuqaallo lasoo dhigay baraha bulshada.
Guddoonka degmada Gili ayaa xaqiijiyay in labadan dalxiisayaal oo jira da’da 20 kana yimid dalka Australia, kuwaas oo la heyb sheegin magacyadooda, in kaamirada qarsoon ay duubtay iyaga oo bar kulan dalxiis oo ku dhow xeebta magaalada ka xadaya laba baaskiil.
Booliska ayaa hadaba awooday inay baaraan kadibna gacanta kusoo dhigaan labadan dalxiisayaal.
Baaritaan muddo qaatay kadib, dalxiisayaasha ayaa lagu qasbay inay qaadaan boorar lagu qoray: “Waxaan ahay tuug. Hasameynin wixii aan sameeyey.” Waxaana lagu qasbay inay xabadka ku qaadaan.
Intaas kadibna waxaa lagu soo wareejiyay waddooyinka magaalada saacado dhowr ah kahor intaan lagu amrin inay iskaga tagaan magaalada. Guddoonka degmada, Mohamed Taufik ayaa sheegay inuusan hubin haddii falkan xatooyo ee labadan dalxiisayaal boolisku ay ciqaab kula ridi karaan.
Waxa ugu weyn waxay tahay inaan dalxiisayaashaan aan in badan laga oggolaan doonin halkan, Taufik ayaa intaas kusii daray. Daganayaasha ayaa hadaba sawiradda lamaanahan kusoo baahiyay baraha bulshada halkaas oo muuqaalkani aad ugu faafay.
Previous: Marka dhaqanku geeri u horseedo nolosha qofkiisa – aqriso qiso gaaban.
Next: Jidadka Muqdisho: Dhisanaye, maan dhowraarsanno?!`
DAAWO – Masjid dhexdiisa Jimicsi lagu sameynayo!